Igumbi elipholileyo kufutshane nendalo kunye nesixeko - I-Airbnb
Igumbi elipholileyo kufutshane nendalo kunye nesixeko
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguMalin
Igumbi elihle kakhulu elimalunga ne-8 yeemitha zesikwere kwiflethi yee-90 square metres kufutshane nendalo kunye nesixeko. Iflethi yimizuzu emi-2 ukusuka kwisikhululo semetro iÖrnsberg, imizuzu eli-15 ngebhayisekile ukuya eSödermalm, kufutshane nemivalo, iikhefi, indalo, ichibi laseMälaren kunye neevenkile ezinkulu.
Siyintsapho encinci enomntwana omnye kunye nenja encinane. Sithanda ukuhamba kakhulu kwaye sihlala rhoqo kumagumbi e-Air'b'nb kunye neeflethi ngexesha lohambo lwethu.
Ndiyathemba ukukubona kungekudala kwisixeko sethu esimangalisayo iStockholm.
Igumbi linewodrophu kunye nedrowa enendawo eninzi yokugcina izinto zakho. Kukho idesika enesihlalo apho unokusebenzela khona. Unokufikelela kwi-wifi yesantya esiphezulu. Ibhedi i-90 cm ububanzi kunye ne-200 cm ubude. Le ndlu ikumgangatho ophezulu ukuze ube nembono entle malunga nommelwane.
Ufikelela kwichibi elimangalisayo iMälaren apho unokuqubha kwaye uye kukhenketho lwe-kayak nje ngeemitha ezingama-500 ukusuka endlwini. Okanye mhlawumbi ungathanda ukuthatha isikhephe ukuya eDrottningholm?